Voadika ny 05 Febroary 2013 7:32 GMT
Taorian'ny fisamborana azy tany Ganà, Charles Blé Goudé, ilay antsoina hoe ny jeneralin'ny làlambe sady havana akaikin'ny filoha teo aloha Laurent Gbagbo, dia voaheloka tamin'ny 21 Janoary noho ny heloka an'ady vitany. Efa nomelohin'ny Firenena Mikambana i Goudé noho “ireo fanambaràna matetika am-pahi-bemaso mikasika ny herisetra miseho amin'ny foto-drafitr'asa sy ny mpiasan'ny Firenena Mikambana ary ireo vahiny” nandritra ny hetsika tamin'ny 2004. Heverin'ny mpisolovava azy, Me Kaufman, fa tsy nanara-dàlana ny fampodiana azy avy any Ganà ho any Côte d'Ivoire.
Fisamborana izay nampiteniteny
Nanaitra ny olona ny fisamborana an'i Charles Blé Goudé, minisitry ny tanora teo aloha sy mpitarika ny Tanora Tia Tanindrazana. Noho ny fahafantarana io fisamborana azy ny 17 Janoary io, dia nirehitra ny tontolon'ny bilaogy ivoariana. Maherin'ny 1750 ny fanambaràna niseho tao amin'ny twitter nandritra iny tontolo andro iny araka ny tranonkala Topsy. Ireo karazan-kevitra navoaka momba an'i Blé Goudé dia taratry ny firehan'ny fiaraha-monina ivoarianina sy mampisongadina ny filàna ezaka mitohy hisian'ny fampihavanana marina taorian'ny olana lehibe izay mbola mamela takaitra sy ireo lonilony goavana.